အိမ်တွင်းဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း Gadget သတင်း
Elvis bucatariu | | လွှ, ကင်မရာ
သင်ခရီးသွားသည်ဖြစ်စေအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေတခါတရံအိမ်တွင်အရာခပ်သိမ်းကောင်းမွန်ကြောင်းသိရန်အရေးကြီးသည်။ စောင့်ကြည့်ကင်မရာလိုတချို့ဖြေရှင်းချက်များ သိုက် Cam (ယခင်က Dropcam ဟုလူသိများသည်) သည်သင့်အတွက်အရာများကိုလွယ်ကူစေသည်၊ သို့သော်တောင်ပေါ်သို့တက်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည် သင့်အိမ်ရှိစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်.
ဤစာမူတွင်အိမ်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုသင်လုပ်နိုင်မည့်မည်သည့်ရွေးချယ်စရာများကိုရှင်းပြပါမည်၊ သို့သော်လုံခြုံရေးစနစ်များကိုအချက်ပေးမှုများနှင့်အခြားအဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များသာအာရုံစိုက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ လုပ်တယ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း အဝေးမှ.
1 ဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာများကို Plug-and-play
2 IP ကင်မရာများ
ထုတ်လုပ်သူအတော်များများဟာသုံးစွဲသူများအတွက်လွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။plug-and- ကစားအချို့သောဝဘ်ဆိုက်များနှင့်စမတ်ဖုန်းအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒီကင်မရာတွေကိုသုံးဖို့ ၎င်းကိုကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်လိုအပ်မည့်တစ်ခုတည်းသောအရာ ကင်မရာကိုယ်တိုင်နှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု.
La သိုက် Cam ဂူဂဲလ်သည်ဤနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အဲဒါကိုသုံးဖို့သင်ရုံရန်ရှိသည် ၎င်းကိုဆက်သွယ်ပါ၊ အကောင့်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ထို့နောက်သင်ဝက်ဘ်မှသို့မဟုတ်သင်၏စမတ်ဖုန်းမှတိုက်ရိုက်ရုပ်ပုံများကိုရယူနိုင်သည်။ အလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်ရန်အပြင်။
သို့သော်၊ ဤအသံသွင်းထားခြင်းကသင့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များလိမ့်မည် တစ်လအနည်းဆုံး ၁၀ ယူရိုဒါပေမဲ့ မိုin်းတိမ်၌ဒေတာသိုလှောင်အရေးပါသောအားသာချက်နေဆဲဖြစ်သည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူဖို့ချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာ cloud ထဲကအသံတွေကိုရယူနိုင်သေးတယ်။ ကိုနှိပ်ပါ Amazon မှအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် Nest Cam ကို ၀ ယ်ယူရန်.
Nest Cam နှင့်ဆင်တူသည့်အခြားထုတ်ကုန်များလည်းပါဝင်သည် HomeMonitor, အ Belkin Netcam HD ကို သို့မဟုတ် SimpliCam.
အပေါ်ကကိရိယာများသည်ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော်လည်း၊ အသံသွင်းချက်များကိုဝေးလံသောဆာဗာတွင်သိမ်းဆည်း။ မရယူလိုပါက ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောဆက်တင်များ တစ်ခုပြီးပြီ နောက်ထပ်စိတ်ကြိုက်သင်သည် IP "ကင်မရာ" တစ်ခုအတွက်အမြဲတမ်းသွားနိုင်သည်။
အိုင်ပီကင်မရာသည်လုပ်နိုင်သည့်ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကင်မရာဖြစ်သည် ကွန်ယက်တစ်ခု၏အင်တာနက် protocol မှတဆင့်ဒေတာပေးပို့ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်မှဗီဒီယိုစီးဆင်းမှုကိုအဝေးမှကြည့်ရှုလိုပါကသို့မဟုတ်သင့်အိမ်ရှိအခြားစက်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုများကိုသိမ်းဆည်းရန်ကင်မရာရှိလျှင်သင်အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိချက်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။
IP ကင်မရာ Amcrest IP2M-841B
အချို့သော IP ကင်မရာများသည်ကွန်ယက်အတွက်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရန်လိုအပ်သည်အခြားသူများကိုစက်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့တိုက်ရိုက်သူတို့၏ဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်နေစဉ် NAS (ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားသောသိုလှောင်မှု) သို့မဟုတ်သင်ဆာဗာတစ်ခုအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်သင်ပြုပြင်ထားသောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်။ အခြား IP ကင်မရာများအတွက် slot တစ်ခုတောင်မှရှိသည် microSD ကဒ်များ ဒါကြောင့်သူတို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာကိုဖန်တီးမည်ဆိုပါကယူဆောင်လာသည့် IP ကင်မရာကိုသင်ဝယ်ယူရမည် အထူး software ကို ဒါကဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ဒီဆော့ဗ်ဝဲကသင့်ကိုတောင်ခွင့်ပြုလိမ့်မယ် ကွန်ယက်မျိုးစုံကင်မရာများ သင့်အိမ်ကိုပိုမိုပြည့်စုံသောအမြင်ရှိရန်။
သတင်းကောင်းကတော့ IP ကင်မရာများဟာ Nest Cam လို plug-and-play ဖြေရှင်းနည်းများထက်ပုံမှန်အားဖြင့်စျေးသက်သက်သာသာသာဖြစ်သည်။
IP ကင်မရာကိုသုံးမည့်အစား၊ ရိုးရှင်းသောဝက်ဘ်ကင်မရာ ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအသံသွင်းတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုသုံးဖို့လိုတယ်.
IP ကင်မရာများနှင့်မတူဘဲ၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာသည်ဖြစ်ရမည် USB မှတဆင့်ကွန်ပျူတာသို့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်IP ကင်မရာသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ရှိနေ၍ Wi-Fi မှတဆင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ဝက်ဘ်ကင်မရာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြုပြင်ရန်အတွက်သင်ဝယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် ဗွီဒီယိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆော့ဗ်ဝဲ IP ကင်မရာများသာမက webcams နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင် သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရမည် ဝက်ဘ်ကင်မရာသည်စောင့်ကြည့်စနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
သင်စီးနင်းစဉ်းစားခဲ့ကြပါ သင်၏အိမ်အတွက်ဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးထောက်ခံချက်မှာသင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည် သင်ကင်မရာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမဝယ်မီရှည်လျားသော။ အကယ်၍ သင်သည် plug-and-play ကင်မရာတစ်လုံး ၀ ယ်မည်ဆိုပါကလစဉ်ကြေးပေးရန်သင့်ကိုတောင်းပန်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် IP ကင်မရာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ကင်မရာတစ်လုံး ၀ ယ်တော့မည်ဆိုပါက၊ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတွင်သင်လိုအပ်သည့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါ ကင်မရာအားလုံးတွင်ညဥ့်နက်သောမြင်ကွင်းသို့မဟုတ် HD အရည်အသွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ကင်မရာ » အိမ်တွင်းဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းစနစ်တစ်ခုကိုဝက်ဘ်ကင်မရာသို့မဟုတ်အိုင်ပီကင်မရာဖြင့်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း